“Teererai Hope Idzi”—Josefa Nevakoma Vake | Tevedzera Kutenda Kwavo
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese (Shanghainese) Chinese (Sichuanese) Chinese (Yunnanese) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Krio Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Maltese Maya Myanmar Nepali Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Ossetian Otetela Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese (Brazil) Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tatar Thai Tigrinya Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Ukrainian Umbundu Urdu Vietnamese Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
TEVEDZERA KUTENDA KWAVO | JOSEFA
JOSEFA akatarisa kumabvazuva achishungurudzika, achishuva kuti dai aikwanisa kubuda muboka racho revafambi, otiza. Musha wavo waiva pedyo, muHebroni, nechekuseri kwemakomo. Sezvo kwainge kwava kudoka, baba vake Jakobho, vaigona kunge vava kugadzirira kuzorora, vasingatombozivi zvakanga zvaitika kumwanakomana wavo wavaida chaizvo. Josefa aisakwanisa kuenda kwavaiva, asi chaaingoziva ndechokuti aigona kusaonazve murume iyeye waaida ainge akura. Vatengesi vacho vakamutarisa, vachichaira ngamera dzavo nemunzira yakapfumbira, yainanga kumaodzanyemba. Vakanga vatenga Josefa uye vairamba vakaisa ziso paari. Kwavari mukomana wacho aikosha kungofanana nemafuta uye zvimwe zvinonhuwirira zvavaiva nazvo, izvo zvaiva pfuma inokosha yaizovaitisa mari kure kuIjipiti.
Zviri pachena kuti Josefa akanga ava nemakore 17 okuberekwa kana kuti achangoti pfuurei. Fungidzira achitarisa kumadokero kuGungwa Guru (Gungwa reMediterranean), achinetseka kunyatsovhura maziso sezvo akanga achiteiwa nezuva rakanga rava kunonyura, achitadza kunzwisisa kuchinja kwakanga kwaita upenyu hwake nokukurumidza. Zvakanga zvakaoma kubvuma kuti vakoma vake vakapotsa vamuuraya uye vakanga vamutengesa semuranda. Zvinofanira kunge zvaiva zvakaoma kuti misodzi isayerera pamatama ake. Aisagona kufungidzira kuti ramangwana rake raizomira sei.
Josefa akarasikirwa nerusununguko rwake asi akaramba aine kutenda kwake
Josefa akava sei mutsekwende yakadaro? Tingadzidzei pakutenda kwemukomana wechiduku akatengeswa uye akarambwa nevakoma vake?
MHURI INE MATAMBUDZIKO
Josefa aibva mumhuri yakakura chaizvo, asi yakanga isina kubatana uye isina mufaro. Zvinotaurwa neBhaibheri nezvemhuri yaJakobho zvinoratidza kuipa kwakaita barika, iro raiva tsika yainge yadzika midzi panguva yacho, yakaregwa naMwari ichiitwa nevanhu vake kusvikira Mwanakomana wake adzorera urongwa hwepakutanga hwekuti munhu ave nemudzimai mumwe chete. (Mateu 19:4-6) Jakobho aiva nevana 14 kana kupfuura, vaakabereka nemadzimai ake maviri Riya naRakeri uye nevashandikadzi vavo, Ziripa naBhiriha. Kubva pakutanga, Jakobho aida Rakeri uyo aiva tsvarakadenga. Haana kubvira ada Riya mukoma waRakeri saizvozvo, uyo waakanyengedzwa kuti aroore. Riya naRakeri vakaramba vachikwikwidzana uye izvi zvakaitawo kuti vana vavo vaitirane shanje.—Genesisi 29:16-35; 30:1, 8, 19, 20; 37:35.
Rakeri akagara kwenguva refu asina mbereko, saka paakazobereka Josefa, Jakobho akaona mwana uyu waakava naye akwegura seaikosha chaizvo. Somuenzaniso, mhuri yacho payaiva parwendo rune ngozi rwekunosangana nemukoma waJakobho, Isau uyo akamboda kumuponda, Jakobho akava nechokwadi kuti Rakeri naJosefa uyo aiva kakomana, vainge vakanyatsochengetedzwa, nechekumashure kweboka racho. Zuva iroro rakaoma rinofanira kunge rakava risingakanganwiki kuna Josefa. Fungidzira kuti akanzwa sei mangwanani iwayo, achinyatsotarisa baba vake vakanga vakwegura asi vachine simba, achishamisika kuti nei vakanga vava kukamhina. Anofanira kunge akashamiswa zvikuru paakaziva kuti baba vake vakanga vaita mutsimba nengirozi ine simba manheru akanga apfuura! Nei vakaita mutsimba? Nokuti Jakobho aida chikomborero kubva kuna Jehovha Mwari. Mubayiro wake wakava wokuchinjwa zita rake kuti rinzi Israeri. Paizova nerudzi rwaizodanwa nezita rake! (Genesisi 32:22-31) Nokufamba kwenguva, Josefa akadzidza kuti madzinza erudzi irworwo aizobva kuvanakomana vaJakobho!
Pave paya, Josefa uyo ainge achiri mudiki, akawirwa nedambudziko paakangoerekana afirwa nemunhu waaida chaizvo. Amai vake vakafa vachisununguka munin’ina wake Bhenjamini. Baba vake vakashungurudzika zvikuru nerufu rwacho. Fungidzira Jakobho achipukuta misodzi yaJosefa zvinyoro-nyoro, achimunyaradza netariro yakambonyaradzawo Abrahamu, sekuru vaJakobho. Josefa anofanira kunge akafara chaizvo kuziva kuti rimwe zuva Jehovha aizomutsa amai vake! Josefa anogona kunge akasvika pakuda zvakadzama “Mwari . . . wevapenyu,” ane rupo. (Ruka 20:38; VaHebheru 11:17-19) Pashure pekufa kwemudzimai wake, Jakobho akaramba achida vanakomana vaviri ivavo vaakabereka naRakeri.—Genesisi 35:18-20; 37:3; 44:27-29.
Vana vakawanda vaigona kukanganiswa nekudiwa saizvozvo, asi Josefa akadzidza unhu hwakanaka kuvabereki vake, akava nekutenda kwakasimba uye akawedzera kunzwisisa zvakanaka nezvakaipa. Paakanga ava nemakore 17, aifudza makwai, achibatsira vamwe vakoma vake, ndokuona zvakaipa zvavaiita. Akanzwa achida kunyarara nyaya yacho kuitira kuti vakoma vake vamufarire here? Pasinei nekuti akanzwa sei, akazoita zvakanaka. Akataura nyaya yacho kuna baba vake. (Genesisi 37:2) Ushingi hwakadaro ndihwo hunofanira kunge hwakaita kuti Jakobho ade Josefa zvakanyanya. Uyu muenzaniso wakanaka chaizvo kuvaKristu vechiduku! Kana ukanzwa uchida kuvanza chivi chakakura chemumwe, zvichida mukoma, munin’ina kana kuti shamwari, zvakanaka kutevedzera Josefa, wova nechokwadi chokuti nyaya yacho yazivikanwa nevanofanira kumubatsira.—Revhitiko 5:1.
Tinogonawo kudzidza kubva paupenyu hwemhuri yaJosefa. Kunyange zvazvo vaKristu vechokwadi vasingaiti barika, pakati pavo panewo vakawanda vane mhuri dzine vana vekurera. Vose vanogona kudzidza kumhuri yaJakobho kuti rusaruro runoita kuti mhuri isabatana. Vabereki vakangwara vane mhuri dzakadaro vanoita zvose zvavanogona kuti vana vavo uye vana vekurera vazive kuti mumwe nemumwe wavo anodiwa, ane zvipo zvakasiyana nevamwe uye anogonawo kuita kuti mhuri ifare.—VaRoma 2:11.
GODO RINODZIKA MIDZI
Jakobho aifarira mwanakomana wake Josefa nokuti ainge akarurama uye akatendeka
Ushingi hwaJosefa hwekuita zvakanaka, hungangodaro huri ihwo hwakaita kuti Jakobho amude kupfuura vamwe vana. Akaita kuti Josefa agadzirirwe nguo yakanaka. (Genesisi 37:3) Inofanira kunge yaiva nguo refu, yakanaka, zvichida yaiva nemaoko aisvika muzvanza uye yakanga yakareba kusvika kutsoka. Zvinoita sokuti nguo yakadaro yaipfekwa nemunhu ane chinzvimbo kana kuti weimba yeumambo.
Jakobho aiva nevavariro yakanaka, uye Josefa anofanira kunge akakurudzirwa neizvi nokuti zvairatidza rudo rwababa vake. Asi nguo iyoyo yaizoita kuti ave nematambudziko. Yeuka kuti mukomana uyu aiva mufudzi. Iri raiva basa raida simba. Fungidzira mukomana wacho wechidiki, aine nguo yeumambo, achifamba nemuuswa hurefu hwakaoma, achikwira matombo, kana kuti achiedza kubvisa gwayana riri mugwenzi reminzwa. Kupfuura izvozvo, chiratidzo ichi chokudiwa naJakobho chaizoita kuti vakoma vake vamuone sei?
Bhaibheri rinopindura kuti: “Vakoma vake pavakaona kuti baba vavo vaimuda kupfuura vakoma vake vose, vakatanga kumuvenga, uye vakanga vasingakwanisi kutaura naye zvine rugare.” * (Genesisi 37:4) Godo ravo rinogona kunzwisisika, asi kwaisava kuchenjera kuti vakoma vaJosefa vave nemafungiro akadaro akaipa. (Zvirevo 14:30; 27:4) Wakambova neshanje here mumwe munhu paakapiwa rukudzo rwawaida? Funga nezvevakoma vaJosefa. Godo ravo rakaita kuti vaite zvaizoita kuti vazvidembe zvakanyanya. Zvavakaita zvinoyeuchidza vaKristu kuti kwaizova kuchenjera ‘kufara nevanhu vanofara.’—VaRoma 12:15.
Zvechokwadi Josefa akaona ruvengo rwaiva nevakoma vake. Saka aiviga nguo yake yakanaka kana vakoma vake varipo here? Anogona kunge akambofunga kudaro. Asi yeuka kuti Jakobho aida kuti nguo yacho ive chiratidzo chokuti Josefa aidiwa. Uyewo Josefa aisada kuodza baba vake mwoyo, saka akaramba achipfeka nguo yacho. Muenzaniso wake unotibatsira. Kunyange zvazvo baba vedu vekudenga vasingambofi vakasarura, dzimwe nguva vanomboitira vamwe vashumiri vavo vakavimbika zvinopfuura vamwe. Uyewo vanovakumbira kuti vave vakasiyana nenyika ino yakaipa, ine tsika dzakaora. Kufanana nenguo yaJosefa, maitiro evaKristu vechokwadi anoita kuti vasiyane nevamwe vanhu. Dzimwe nguva izvozvo zvinoita kuti vaitirwe godo uye vavengwe. (1 Petro 4:4) MuKristu anofanira kuvanza zvaari semushumiri waMwari here? Kwete. Anongofanira kuita sezvakaitwa naJosefa asina kuvanza nguo yake.—Ruka 11:33.
Pasina nguva Josefa akarota hope dzaishamisa. Muhope dzokutanga, akaona iye nevakoma vake, mumwe nemumwe achisunga chisote chezvirimwa. Asi zvisote zvevakoma vake zvakakomberedza chake chakanga chakati twasu, zvikachikotamira. Muhope dzechipiri, zuva, mwedzi, uye nyeredzi 11 zvaimukotamira. (Genesisi 37:6, 7, 9) Josefa aizoitei nehope idzodzo dzaiva nezvinhu zvaasina kujaira?
Hope dzacho dzakabva kuna Jehovha. Dzaiva dzeuprofita uye Mwari aida kuti Josefa adziudzewo vamwe. Josefa aifanira kudzitaura sezvakazoitwa nevaprofita vose vakatevera, avo vakataura mashoko uye mitongo yaMwari kuvaIsraeri vaipanduka.
Josefa akataura nokungwarira kuvakoma vake kuti: “Ndapota, teererai hope idzi dzandarota.” Vakoma vake vakaziva zvadzaireva, uye havana kutombozvifarira. Vakamupindura kuti: ‘Uchava mambo wedu here kana kuti, uchava nesimba patiri here?’ Nyaya yacho inowedzera kuti: “Naizvozvo vakawana chikonzero chitsva chokumuvengera hope dzake nemashoko ake.” Paakaudza baba vake nevakoma vake hope dzechipiri, havana kuzvifarira. Tinoverenga kuti: “Baba vake vakamutsiura vakati kwaari: ‘Hope idzi dzawarota dzinorevei? Ini naamai vako nevakoma vako tichauya tokukotamira here?’” Asi Jakobho akaramba achifunga nezvenyaya yacho. Jehovha angangodaro aitaura nemukomana wacho here?—Genesisi 37:6, 8, 10, 11.
Josefa akanga asiri mushumiri waJehovha wekutanga kana kuti wekupedzisira akakumbirwa kuti ataure mashoko euprofita aisazofarirwa nevakawanda uye aizogona kuita kuti atambudzwe. Jesu ndiye aipfuura vose, uye akaudza vadzidzi vake kuti: “Kana vakanditambudza, vachakutambudzaiwo.” (Johani 15:20) VaKristu vemazera ose vanogona kudzidza zvakawanda kubva pakutenda uye ushingi hwaiva naJosefa.
RUVENGO RUNOSVIKA PAKAIPISISA
Pasina nguva Jakobho akatuma Josefa. Vakoma vaJosefa vaifudza zvipfuyo kuchamhembe pedyo neShekemu, kwavakanga vambomutsa ruvengo nevamwe vanhu munguva pfupi yakanga yapfuura. Semubereki, Jakobho aida vana vake, saka akatuma Josefa kuti anzwe kuti vainge vakadini. Ungafungidzira here kuti Josefa akanzwa sei? Aiziva kuti vakoma vake vakanga vatowedzera kumuvenga! Vaizozviona sei paaizouya achimiririra baba vavo? Kunyange zvakadaro, Josefa akateerera ndokuenda.—Genesisi 34:25-30; 37:12-14.
Paiva nedaro rakareba ringangodaro raida mazuva mana kana kuti mashanu. Shekemu yaiva makiromita anenge 80 kuchamhembe kweHebroni. Paakasvika kuShekemu, Josefa akanzwa kuti vakoma vake vakanga vaenda kuDhotani, makiromita anenge 22 kuchamhembe kweShekemu. Paakanga ava kusvika kuDhotani, vakoma vake vakamuona achiri kure. Ruvengo rwavo rwakabva rwasvika pakaipisisa. Nhoroondo yacho inoti: “Vakataurirana vachiti: ‘Tarirai! Hoyo muroti uya auya. Zvino uyai, ngatimuurayei, timukande mune rimwe remakomba emvura; uye tichati chikara chinorura chakamudya. Tichabva taona kuti hope dzake dzichaguma nei.’” Asi Rubheni akanyengetedza vanin’ina vake kuti vakande Josefa mugomba ari mupenyu, achifunga kuti aigona kuzomununura pave paya.—Genesisi 37:19-22.
Josefa akasvika asingambofungiri kuti vaida kumuuraya, zvichida achitofunga kuti vaizomugamuchira zvakanaka. Pane kudaro, vakoma vake vakamurwisa! Vakamubvisa nguo yake yakanaka neutsinye, vakamukwekweretsa, ndokumukanda mugomba rainge risisina mvura. Akabva awira mugomba racho! Achakavhiringidzika nezvainge zvaitika, akaedza kubuda, asi zvairamba. Aingoona makore chete, ukuwo manzwi evakoma vake achidzikira zvishoma nezvishoma. Akashevedzera achiteterera, asi havana kumuteerera. Vakadya zvavo vari pedyo nepaaiva, vasingatombokendengi. Vakafungazve kumuuraya Rubheni asipo, asi Judha akavanyengetedza kuti vamutengese kuvatengesi vaipfuura. Dhotani yaiva pedyo nemugwagwa waishandiswa nevezvokutengeserana kuenda kuIjipiti, uye pasina nguva boka revaIshmaeri nevaMidhiyani rakapfuura nepo. Rubheni asati adzoka, vakanyorerana chibvumirano chokutengesa Josefa. Vakatengesa munin’ina wavo semuranda nemashekeri 20. *—Genesisi 37:23-28; 42:21.
Josefa aitsigira zvakarurama asi vakoma vake vaimuvenga
Iye zvino ngatidzokerei kwatangira nyaya yedu. Sezvaaiva mumugwagwa unoenda kumaodzanyemba, achiendeswa kuIjipiti, zvaiita sokuti Josefa akanga arasikirwa nezvinhu zvose. Akanga amanikidzwa kuparadzana nevamwe. Kwemakore, hapana chaaizoziva nezvemhuri yake. Aisazoziva nezvekunetseka kwaizoita Rubheni paaizoziva kuti Josefa haasisipo; nezvekushungurudzika kwaizoita Jakobho pashure pokunyengerwa kuti afunge kuti Josefa waaida akanga afa; nezvasekuru vake Isaka vainge vakwegura; uye nezvemunin’ina wake Bhenjamini waaida uyo waaizosuwa zvikuru. Asi Josefa akanga arasikirwa nezvinhu zvose here?—Genesisi 37:29-35.
Josefa aiva nechimwe chinhu chaisagona kutorwa nevakoma vake: kutenda kwake. Aiziva zvakawanda nezvaMwari wake Jehovha, uye hapana chaizomutorera ruzivo irworwo, kungava kuendeswa kure nekumba, matambudziko ekuva nhapwa achienda kuIjipiti, kunyange ruzvidzo rwekutengeswa semuranda kumuIjipiti akapfuma ainzi Potifari. (Genesisi 37:36) Matambudziko ose aya akaita kuti Josefa ave nokutenda kwakasimba uye atsunge kuramba ari pedyo naMwari wake. Munyaya dzichatevera, tichaona kuti kutenda ikoko kwakaita sei kuti Josefa akosheswe zvikuru naMwari wake Jehovha uye abatsire mhuri yake yaiva mudambudziko. Zvinokosha kuti titevedzere kutenda kwaJosefa!
^ ndima 15 Vamwe vatsvakurudzi vanoti vakoma vaJosefa vakafunga kuti chipo chaakapiwa nababa vake chairatidza kuti vaida kumupa udangwe. Vakoma vake vaiziva kuti Josefa aiva mwana wekutanga waJakobho nemudzimai wake waaidisa, waanga agara achida kuroora asati anyengerwa kuti aroore Riya. Uyewo, Rubheni uyo aiva dangwe raJakobho, akanga arara nemurongo wababa vake, zvikaita kuti anyadzise baba vake, ndokurasikirwa neudangwe hwake.—Genesisi 35:22; 49:3, 4.
^ ndima 25 Kunyange muzvinhu zviduku zvakaita seizvi, Bhaibheri rakarurama. Zvinyorwa zvemunguva yacho zvinoratidza kuti muranda aiwanzotengeswa nemashekeri 20 muIjipiti.
“Ndingaita Seiko Chinhu Ichi Chakaipa Kwazvo?”
Josefa akaramba sei kuita zvaidiwa nemudzimai waPotifari ainge akatsunga kumunyengera?
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe “Ndapota, Teererai Hope Idzi”